ekhaya > Ukuhamba eYurophu > Ziziphi I-Train Routes odume And Historical
I whooshing isandi uloliwe umzobo ube isitishi, kwaye ithuba lokufumana nabemkayo zifika kwindawo ethile. Ngaba ucinga into engcono kunokuba Famous kunye Historical Train Routes?
London eVenice kwi Orient Express – Eyona Ndlela inde yoDumileyo yoLuntu kunye neMbali
Oku kuya kakhulu ngokuqinisekileyo kabini ukuya njengosuku wembali! Oku yeyona ndlela idumileyo kunye neMbali yoLoliwe kunye ne uloliwe romantic indlela emhlabeni. Isuka eParis kwi eya kwisixeko Byzantine ka Istanbul. Wena kungase itikiti eqhelekileyo ukusuka GcinaATrain ukuhamba kulo mzila, okanye uphume ngokuba elihle kakhulu ukhetho kwaye xhumela kwi Orient Express. Le ngamayelenqe kwalo loliwe zodidi ke adumileyo iphefumlelwe Agatha Christie. Ezi ntsuku akukho nto elide zokusebenza uhlobo yayo yoqobo kodwa nomoya walo ohlala kulo Belmond kaThixo Venice-Simplon Orient Express. Kukho oololiwe ezimbini, inyaniso, enye neenqwelwana obusuka evela 1920 30 yaye omnye a wembali uloliwe British Pullman.
Indlela entsha imimoya indlela yayo ku eLondon eVenice, isihlandlo kubandakanya ezinye kwiindawo eYurophu, kwaye original kanye ngonyaka-Paris-Istanbul uhambo ngo Agasti.
Ukuhamba ngasempumalanga evela Zermatt, kumaqweqwe uhambo imini yonke 91 imigudu kanye 291 imizila njengoko uqengqa amadlelo zasezintabeni edlulileyo kumazantsi eSwitzerland, yamandulo amachibi, inemizana picture-ukugqibelela. Iimbalasane uhambo ziquka Oberalp Pass, indawo kakhulu kwi ukhwele kwi 6706 ezinyaweni. Enye i odumileyo I-Landwasser Viaduct - omangalisayo-arch ezintandathu isakhiwo emi 200 iinyawo olwandle ibe itonela usike ngqo eqeleni.
Umgca weWest Highland, Glasgow to Mallaig - eScotland
Ngoku ukuba ulikhoboka series TV Outlander, egxile endala-school Scotland zinkomo. Ngoko ke akukho nto le nto kuluhlu lwe Famous kunye Historical Train Routes. I-West Highland Line yeyona ndlela ebalaseleyo ukuba sasendle lizwe, ugu. Xa uloliwe amagqabi Glasgow - sixeko sikhulu eSkotlani i-- imbonakalo yedolophu ngokukhawuleza afe isikhotha glens kunye lochs ezolileyo. Isihloko ngasentla, eWest Highland Line udlula entlango esemaphandleni Rannoch YamaSilamsi. Emva koko iye idlule ayafika Ben Nevis, irwece phantsi e Fort William. Ukutshintshela ulwalathiso nokuya ngasentshonalanga, uloliwe icanda i Glenfinnan Viaduct (evezwe Harry uMbumbi ifilimu uthotho) phambi kokuba bafike entlanganisweni kwizibuko eyenziwa ka Mallaig.
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye itekisi asinike nje ngetyala nge ikhonkco kule post blog, okanye cofa apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ffamous-historical-train-routes%2F%3Flang%3Dxh - (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela)
#odumileyo	#Oololiwe abadumileyo	#ZoQeqesho lweMbali	europetravel	uhambo olude	Isikhululo sikaloliwe	tips uloliwe	train Travel
Business ahambe ngetreyini, Iingcebiso zokuhamba, Ukuhamba eYurophu